War saxaafadeed uu saaray golaha AqalkaSare ee baarlamaanka Soomaaliya | RunsheegNews
War saxaafadeed uu saaray golaha AqalkaSare ee baarlamaanka Soomaaliya
Taariikh: 09 June 2020
Guddiga Joogtada ah ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya wuxuu kulan aan caadi ahayn ku yeeshay barta Golaha Aqalka Sare ee B.F.S. uu ku leeyahay Aaladda Zoom-ka maanta oo ay taariikhdu tahay 09/06/2020:
Markii uu ka baaraan degay xaaladda kala-guurka ah ee uu Dalku galay iyada oo howlo masiiri ah ay horyaallaan Goleyaasha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Markii uu arkay in baahi deg deg loo qabo in laga wada-hadlo arrimaha doorashada maadaama muddo xileedkii hay'adaha dastuuriga uu sii dhammaanayo.
Markii uu garwaaqsaday in ay lagama maarmaan tahay in Goluhu uu ku leeyahay kaalin dastuuri ah isu keenista madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed; si looga arrinsado loogana heshiiyo hannaanka lagu maaraynayo xaaladda kala-guurka ah.
Markii uu arkay xaaladda caafimaad ee ka dhalatay xanuunka safmarka ah ee COVID 19, musiibooyinka dabiiciga ah, xaaladaha amni darro iyo dhaqaale xumo ee ka jira Dalka, kuwaas oo dhibaato ba'an ku haya Shacabka Soomaaliyeed.
Wuxuu soo saaray go'aannada soo socda:
1. Fadhiyada Guud ee Golaha Aqalka Sare waxay billaabmi doonaan marka Guddoonka Labada Aqal ee BFS ay ka wada-hadlaan sida ay Golayaasha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya uga howlgelayaan shuruucda/arrimaha hore-tebinta leh ee horyaalla Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya isla markaasna Guddiga Joogtada ah ee Aqalka Sare uu meel-mariyo ajendaha guud ee Aqalka.
2. Guddiga Joogtada ce Aqalka Sarc BPS wuxuu ugu baaqayaa Madaxda Qaranka iyo Madaxda Dowlad Gobolecdyada in ay u turaan Shacabka Soomaaliyeed ec ay mudada dheer soo ragaadiyeen khilaafyada siyaasadeed iyo colaadaha daba-dhceraaday iyo in ay dedaal hagar Ia'aan ah ku bixiyaan ka miro-dhalinta hayaanka loogu jiro sidii loo gaari lahaa dowladnimo taabbagasha oo ku dhisan dimuquraadiyad wada-ogol ah.
3. Guddiga Joogtada ee Aqalka Sare BFS wuxuu garwaaqsaday in qabashada doorashooyinka heer federaal ay u baahan tahay in wada tashi deg deg ah ay isugu yimaadaan inta ka horeysa 25-ka Bisha Juun, 2020 dhammaan madaxda Qaranka oo ugu horreeyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaaajo, Xukuumadda Federaalka, Baarlamaanka Federaalka, Madaxda Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka. Dhammaan daneeyeyaasha siyaasadda waxaa lagala tashan doonaa hannaanka lagu geli doono Doorashooyinka Qaranka ee 2020/2021 si loo helo hab iyo hannaan raalli la isaga yahay oo doorashada lagu galo. Goobta uu wada-hadalku ka dhacayo waxaa lagala tashan doonaa dhinacyada ay khuseyso ee labada heer dowladeed.
4. Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, isaga oo gudanaya waajibaadka loo igmaday sida ku cad Qod.7"d iyo Qod.61aad(4) ee Xeer-hoosadka Golaha Aqalka Sare, isla markaasna fulinayana waajibaadka dastuuriga ah ee Golaha Aqalka Sare ee BFS si waafaqsan Qod.61"d (3) ee Dastuurka KMG ah, wuxuu magacaabayaa guddi uu isagu hoggaaminayo; guddigaas oo ka shaqeyn doona isu-keenista madaxda labada beer dowladeed iyo qabsoomidda shirka kor ku xusan.
5. Guddigu wuxuu baaq codsi ah u soo gudbinayaa Shacabka Soomaaliyeed, Bulshada Rayidka ah, culimada, aqoonyahanka, iyo wax-garadka Soomaaliyeed in ay Golaha Aqalka Sare ku garab-istaagaan waajibka dastuuriga ah ee loo igmaday.
Sen. Cabdi Xaashi Cabdullaahi Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya
aqalka sare baarlamaanka soomaaliya war saxaafadeed golasha shacabka